Inqubomgomo yethu Yobumfihlo - Isibonisi Esilula Esiningi - Isoftware Yezimpawu Zedijithali
Idatha Yakho Ivikelwe
Inqubomgomo Yobumfihlo ye-Virtual Cockpit UK LTD
Ku-Easy Multi Display, etholakala ku-www.easy-multi-display.com, enye yezinto ezibaluleke kakhulu kithi eyimfihlo yezivakashi zethu. Lo mbhalo weNqubomgomo Yobumfihlo uqukethe izinhlobo zolwazi eziqoqwayo futhi ezirekhodwe yi-Easy Multi Display nokuthi silusebenzisa kanjani.
Uma unemibuzo eyengeziwe noma udinga ulwazi oluthe xaxa mayelana nenqubomgomo yethu yobumfihlo, ungangabazi ukuxhumana nathi nge-imeyili ku support@easy-multi-display.com.
Uma ufuna ukwazi ukuthi yini inqubomgomo yobumfihlo, ungabhekisa kwifayela le- I-athikili ye-wikipedia.
I-Easy Multi Display ilandela inqubo ejwayelekile yokusebenzisa amafayela we-log. Lawa mafayili enza izivakashi zivakashele amawebhusayithi. Zonke izinkampani zokubamba zenza lokhu kanye nengxenye yokuhlaziywa kwemisebenzi yokusingathwa. Imininingwane eqoqwe ngamafayela we-log ifaka amakheli we-inthanethi (i-IP), uhlobo lwesiphequluli, umhlinzeki wesevisi ye-Intanethi (ISP), usuku nesikhathi isitembu, amakhasi okubhekiswa / aphumayo, futhi mhlawumbe nenombolo yokuchofoza. Lokhu akuxhunyiwe kunoma yiluphi ulwazi olukhonjwa uqobo. Inhloso yolwazi ukuhlaziya izitayela, ukuphatha isiza, ukulandela ukuhamba kwabasebenzisi kuwebhusayithi, nokuqoqa imininingwane yabantu.
Njenganoma iyiphi enye iwebhusayithi, i-Easy Multi Display isebenzisa 'amakhukhi'. La makhukhi asetshenziselwa ukugcina imininingwane kufaka okuthandwa yizivakashi, namakhasi akuwebhusayithi lapho isivakashi sifinyelele noma sivakashele. Imininingwane isetshenziselwa ukwengeza ulwazi lwabasebenzisi ngokwenza ngezifiso okuqukethwe kwekhasi lewebhu lethu kususelwa kuhlobo lwesiphequluli sabavakashi kanye / noma olunye ulwazi.
Ungaxhumana nalolu hlu ukuthola inqubomgomo yobumfihlo yalowo nalowo ophathina abakhangisayo be-Easy Multi Display.
Inqubomgomo Yobumfihlo Ye-Multi Display ayisebenzi kwabanye abakhangisi noma amawebhusayithi. Ngakho-ke, sikucebisa ukuthi uthinte Izinqubomgomo Zobumfihlo ezifanele zalesi seva esivela eceleni ukuze uthole imininingwane eminingi. Kungafaka ezikwenzayo nemiyalo yokuthi ungaphuma kanjani kokunye ukukhetha. Ungathola uhlu oluphelele lwale Izinqubomgomo Zobumfihlo nezixhumanisi zazo lapha: Izixhumanisi zenqubomgomo yobumfihlo. Ungakhetha ukukhubaza amakhukhi ngezinketho zakho zesiphequluli. Ukwazi imininingwane eminingi mayelana nokuphathwa kwamakhukhi ngeziphequluli ezithile zewebhu, kungatholakala kumawebhusayithi eziphequlululi. Ayini Amakhukhi?
Enye ingxenye yokubaluleka kwethu ukufaka ukuvikelwa ezinganeni ngenkathi usebenzisa i-inthanethi. Sigqugquzela abazali kanye nabagadi ukuthi babheke, babambe iqhaza, futhi / noma baqaphe futhi baqondise imisebenzi yabo eku-inthanethi. I-Easy Multi Display ayiqoqi ngamabomu noma yimiphi imininingwane eqondakalayo yomuntu siqu evela ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-13. Uma ucabanga ukuthi ingane yakho ihlinzeka ngalolu hlobo lwazi kuwebhusayithi yethu, sikukhuthaza ngokuqinile ukuthi usithinte ngokushesha futhi sizokwenza imizamo yethu emihle ngokushesha susa imininingwane enjalo kumarekhodi ethu.
Le Nqubomgomo Yobumfihlo isebenza kuphela emisebenzini yethu eku-inthanethi futhi isebenza ngokusemthethweni kubavakashi bewebhusayithi yethu maqondana nemininingwane ababeyabelana futhi / noma abayiqoqele ku-Easy Multi Display. Le nqubomgomo ayisebenzi kunoma yiluphi ulwazi oluqoqwe ngokungaxhunyiwe kwi-inthanethi noma ngeziteshi ezingekho kule webhusayithi.
Uma usenemibuzo mayelana nenqubomgomo yobumfihlo ye-Easy Multi Display, sicela uxhumane nesevisi yethu yamakhasimende ku support@easy-multi-display.com. Sizojabula ukukusiza!